गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि3- Blockchain समाचार
गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि 3
सुरक्षा उपाय को बेवास्ता
cryptocurrencies लगानी उच्च जोखिम संग सम्बन्धित छ, लगानीकर्ताले लागि गुप्त-बचत प्राप्त गर्न आक्रमण विभिन्न विधिहरू जो प्रयोग scammers को एक ठूलो संख्या को बजार मा उपस्थिति को फलस्वरूप सहित. त्यसैले, को cryptotrader पत्रुस McCormack को पहिचान अनुसार, गुप्त जेब आक्रमण दैनिक प्रतिबद्ध छन्. को आदानप्रदान पनि बल निरन्तर जाँच गर्न विषय हो.
जब cryptocurrencies काम एक cryptocurrency प्रत्येक होल्डर संभावित धम्की सजग हुन र सबै सावधानीहरु पालन गर्नुपर्छ:
– भण्डारण cryptocurrency को विधि चयन: यो चिसो पर्स प्रयोग गर्नुहुन्छ र तिनीहरू जगेडा गर्न सबै भन्दा राम्रो छ;
– प्रयोगकर्ता को दुई तत्व प्रमाणीकरण प्रयोग
– एक विश्वसनीय विरोधी-भाइरस कार्यक्रम स्थापना
– आफ्नो निजी कुञ्जी कहिल्यै खुलासा
– सधैं पर्स र लिंक को ठेगाना जाँच
– पासवर्ड को एक विश्वसनीय प्रणाली छ र बस्न-वाक्यांश
यसलाई आफ्नो पासवर्ड र SID-वाक्यांश सुरक्षित स्थानमा राखेर लायक पनि छ, अन्यथा यो मार्क Frauenfelder को भाग्य बारम्बार संभावना छ, जो मा 2017 लगभग भन्दा बढी आफ्नो bitcoins गुमाए $ 32,000. र सबै किनभने उहाँले एक पासवर्ड संग एक पाना गुमाए 24 एक चिसो वालेट शब्दहरू. उहाँले वालेटमा पिन-कोड सम्झना छैन कि साकार, उहाँले कुनै पनि तरिकामा आफ्नो cryptocurrencies प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर बोध गरेर horrified थियो.
Frauenfelder को गुप्त वालेट निर्माता को प्राविधिक सहयोग गर्न अपिल, फोरम मा यस्तो लेखे, उहाँलाई Hack तरिकाहरू खोजी र पनि एक सम्मोहन विशेषज्ञ गर्न बन्द, तर यो सबै इच्छित परिणाम ल्याउन थिएन.
फलस्वरूप, उहाँले एक जवान ह्याकर द्वारा मदत थियो, जो कसरी चिसो वालेटमा सफ्टवेयर दरार मा एक निर्देशन लेखे. तथापि, उसलाई तनाव धेरै महिना खर्च, पासवर्ड र SID-वाक्यांश पुन लागि पैसा र आयोग पनि ह्याकर गर्न.
गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि2गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि 4
Blockchain समाचार 16.07.2018
न्यूयोर्क मुद्दाहरू cryp ...
अघिल्लो पोस्ट:गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि 2
अर्को पोस्ट:Ethereum फाउन्डेसनले को प्रापकलाई घोषणा “अनुदान को पहिलो लहर” को $ 2.5 लाख